लम्बिँदो मतगणना : विकल्प बन्न सक्छ-विद्युतीय मतदान « Surya Khabar
१० जेठ, काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको १० दिनसम्म लगातार मतगणना गर्दा अझै काठमाडौँ महानगरपालिकासहित १४ वटा पालिकाको अन्तिम परिणाम आउँन बाँकी रहेको छ ।
के यस प्रकारको निर्वाचन प्रणालीलाई सरल, छरितो र आधुनिक तुल्याउन विद्युतीय मतदान प्रणाली (इ-भोटिङ) मा लग्न निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कर्मचारी संयन्त्र तयार छ ? यसका लागि आर्थिक जोहो गर्न नेपाल सरकार सक्षम छ ? स्थानीय तह निर्वाचनको ढिलाइपूर्ण गणना भएकाले मात्रै होइन निर्वाचनअघि पनि यस प्रकारको बहस भएको थियो । निर्वाचन तयारीका क्रममा भएका पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित उच्च अधिकारीहरुले आगामी दिनमा विद्युतीय मतदानमा जान आग्रह गरेका थिए ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नमूनाका रुपमा महानगरहरुका लागि भए पनि विद्युतीय मतदान सञ्चालन गर्न निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार र दलहरुका लागि प्रस्ताव गरेको थियो तर सबैले यसलाई अहिले नै विश्वासिलो मान्ने आधार दिएनन् । साथमा एकैपटक मेसिनका लागि ठूलो आर्थिक लगानीका लागि स्रोतको खोजी पनि हुन सकेन । निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबरा समयको बचत हुने यस प्रकरको प्रणालीमा विश्वास गरेर सर्वदलीय सहमति भएमा लागु गर्न आयोग तत्पर रहेको बताए । रासससँगको कुराकानीमा आयुक्त जबराले नयाँ प्रणालीमा जान राज्य तयार भएमा मेसिनहरु अनुदानमा पनि ठूला मुलुकबाट ल्याउन प्राप्त हुन सक्ने बताए । यो प्रणाली लागू भएका यसको सञ्चालन र प्रयोग तथा विश्वासनीयताका लागि आयोग, दलहरु, मतदाता र सम्बन्धित पक्षलाई तालिम दिन सकिने उनको भनाइ छ ।